WARBIXIN: Man City Mise Man United: Alexis Sanchez Oo La Hordhigay Go,aankii Ugu Dambeeyay Ee Ku Aadan Mustaqbalkiisa – Kooxda.com
Home 2018 January Ingiriiska, Wararka Maanta, Warbixinada Ugu Xiisaha Badan, Warbixino WARBIXIN: Man City Mise Man United: Alexis Sanchez Oo La Hordhigay Go,aankii Ugu Dambeeyay Ee Ku Aadan Mustaqbalkiisa
WARBIXIN: Man City Mise Man United: Alexis Sanchez Oo La Hordhigay Go,aankii Ugu Dambeeyay Ee Ku Aadan Mustaqbalkiisa
Kooxaha reer Manchester ee United iyo City ayaa lagu soo waramayaa in ay xiddiga kooxda Arsenal ee Alexis Sanchez ku wargaliyeen go,aankooda ugu dambeeya ee ay ku baacsanayaan xiddiga reer chile.
Kooxda Man city ayaa lagu soo waramayaa in ay diyaar u tahay in ay isaga harto xiddiga diirada u saaran wakhtiga dheer una lumiso kooxda ay jaarka yihiin ee United maadama ayna diyaar u ahayn in ay dagaal lacageed u galaan xiddiga.
Waxa ay rajaynayaan in rabitaanka xiddiga ee ah in uu ka hoos ciyaaro Guardiola uu ka caawiyo in ay xiddiga helaan si ay ugu xoojiyaan kooxdooda.
United ayaa isku dayaysa in ay xiddiga ka afduubato kooxda Man city iyaga oo kooxda Arsenal u soo bandhigaya lacag dhan 35 milyan oo euro iyo waliba xiddig.
ilo wareedyo ku dhaw kooxda Man city ayaa sheegaya in ayna City diyaar u ahayn in ay dagaal lacageed la gasho dhigeeda United waxana ay diidan yihiin in ay la kulmaan lacagta 35 milyan ee ay Arsenal dalbanayo iyo 5-ta milyan ee wakiilkiisa maadama uu xiddigu xor noqon doono dhamaadka xilli ciyaareedkan.
City ayaa la fahamsan yahay in ay kaliya rabaan in ay bixiyaan lacag dhan 20 milyan oo euro si ay u helaan sanchez inta lagu guda jiro suuqa January si ay ugu buuxiyaan booska uu ka dhaawacmay Gabriel Jesus.
Waxa ay diyaar u yihiin in ay sugaal ilaa xagaaga iyaga oo ka war qaba rabitaanka Alexis Sanchez ee uu ku doonayo in uu mar kale la midoobo Alexis Sanchez oo ay ka soo wada shaqeeyeen kooxda Barcelona.
Inkasta oo ay saxiixa xiddiga ku kalsoon yihiin hadana waxa jira baqdin ay city qabto oo ah in uu xiddigu doonayo in uu Arsenal isaga tago suuqa January taas oo keeni karta in uu samri waayo ilaa xagaaga kuna biiro kooxda Man United hadii ayna City u dhaqaaqin haatan.
Mourinho ayaa si taxadar leh u doortay kalmadihii uu ku amaanay Sanchez waxana uu yiri Waa xiddig aad u fiican oo ayna United iska indha tiri karin hadii la heli karo.
Hadaba waxa ay haata dhankiisa tahay in uu Alexis Sanchez doorto kooxda uu doonayo in uu ku biiro inta bishan Lagu guda jiro.